कांग्रेसबाटै यसरी बाबुरामलाई घात !
काठमाडौं, मंसिर १८ । अघिल्लो दिनसम्म सूर्य चिन्ह लिएर गोरखा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार हुन खोजेका डा. बाबुराम भट्टराई एकाएक कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुगेपछि कांग्रेसबाटै अन्तर्घात व्यहोरिरहेका छन् । जसले गर्दा परिणाममा बाबुराम पक्ष कमजोर देखिएको कांग्रेसहरु बताउँछन् ।
खासगरि माओवादी उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षमा गोरखा बजारका नेवार समुदाय संगठितरुपमा खुलेपछि बाबुरामको अवस्था कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको छ । पालुङटार नगरपालिकामा कांग्रेस र नयाँ शक्तिको मत ८ हजारभन्दा बढी थियो । एमाले र माओवादीको मत करिब ५ हजारको हाराहारीमा भए पनि बाबुरामलाई कांग्रेसको मत कम गएको चर्चा छ । साथै, गोरखा नगरपालिकाबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मत बढी खसेको चर्चा पनि छ ।
पालुङटार नगरपालिकामा पनि बाबुरामभन्दा नारायणकाजीले बढी मत पाएको हल्ला छ । त्यो अवस्थामा नारायणकाजी बलियो हुनेछन् । खोप्लाङ क्षेत्रबाट बाबुरामलाई अपेक्षित मत प्राप्त नभएको चर्चा गरिएको छ । यदि खोप्लाङबाट बाबुरामलाई कम मत खसेको हो भने बाबुराम पराजित हुने निश्चित रहेको नयाँ शक्तिका नेताहरुले नै भनेका छन् । त्यसोत कांग्रेसबाट पनि बाबुरामले अपेक्षित मत पाएनन् । काठामाडौंमा बस्ने गोरखाका कांग्रेसी कार्यकर्ता बाबुरामलाई मत हाल्न उत्साहित भएनन् । आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।